Pamusoro kurapwa - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva kuti nei chigadzirwa chichifanira kurapwa kwepamusoro, chii chiri basa, uye ndedzipi dambudziko rinogadzirisa.
Chekutanga pane zvese, nzira yekurapa yepamusoro yekuumbika kugadzira pamusoro pechiso cheiyo substrate zvinhu izvo zvakasiyana neanogadzira, epanyama uye emakemikari zvimiro zveiyo substrate. Chinangwa chekurapwa kwepasirose ndechekusangana neicho chigadzirwa cheye kurwisa, kupfeka kupfeka, kushongedza kana zvimwe zvakakosha zvinodiwa zvinoshanda.
Vatengi vazhinji vachatibvunza kuti sei tichida kurapwa kwepamusoro, basa nderei, uye chikonzero chei chekuwedzera maitiro aya?
Ouzhan technical staff:Surface kurapwa kubvisa mhando dzese dzekunze nyaya (senge mafuta, ngura, guruva, yekare pendi firimu, nezvimwewo) zvakanamatira pamusoro pechinhu, uye nekupa yakanaka substrate yakakodzera kune iyo yekunamatira zvinodiwa kuti ive nechokwadi chekuti iyo yekunamisa firimu ine dziviriro yakanaka. Kuora kweyekuita, kwekushongedza mashandiro uye mamwe mabasa akakosha, pamusoro pechinhu kunofanirwa kufanotangiswa usati wapenda. Basa rakaitwa nerudzi urwu rwekurapa rwakaunganidzwa kunzi pre-kupenda (pamusoro) kurapwa kana (pamusoro) prereatment.
Mushonga wekumusoro unosimbisa kusimba uye hasha kuramba kwechigadzirwa. Pamusoro pehwaro hwepakutanga, inowedzera nguva yekushandisa uye inochengetedza yakawanda nguva, mutengo nemari.
Iyi nzira inoshandisa electrode reaction kuti igadzire kupfeka pamusoro peiyo workpiece. Maitiro makuru ndeaya:
Mune mhinduro ye electrolyte, iyo yekushandira ndiyo cathode. Maitiro ekuumba unhani pamusoro pechinhu pasi pechiitiko cheiyo yekunze magetsi inonzi electroplating. Iyo yekumira yakaturikidzana inogona kunge iri simbi, alloy, semiconductor kana iine akasiyana akasimba zvikamu, senge yendarira yakanamirwa pamoto uye nickel yakanamirwa pamoto.
Mune mhinduro ye electrolyte, iyo yekushandira ndiyo anode. Maitiro ekugadzira oxide firimu pamusoro pechinhu pasi pechiito chekunze kwazvino inonzi anodization, senge iyo anodization yealuminium alloy.
Kurapa kweiyo oxidation yesimbi kunogona kuitwa nemakemikari kana nzira dzemagetsi. Iyo nzira yemakemikari ndeyekuisa iyo yekushandira mune inogadziriswa mhinduro, uye vimba nekemikari chiitiko kuti vagadzire oxide firimu pamusoro peiyo workpiece, senge kublue kwesimbi.
Iyi nzira haina chiito chazvino, uye inoshandisa kudyidzana kwemakemikari zvinhu kuti vagadzire kupfeka pamusoro peiyo nzvimbo yebasa. Maitiro makuru ndeaya:
(1) Chemical shanduko yekumusoro kurapwa
Mune mhinduro ye electrolyte, simbi yekushandira haina chekuita chiripo chiripo, uye chinhu chemakemikari mumhinduro chinobata pamwe neyekushandira kuti chigadzire pamusoro payo, inonzi chemakemikari ekushandura firimu kurapwa. Senge bluing, phosphating, passivation, uye chromium munyu kurapwa kwesimbi nzvimbo.
(2) Electroless yakanamirwa pamifananidzo
Mune mhinduro ye electrolyte, pamusoro peiyo workpiece inorapwa zvine mutsindo pasina maitiro ekunze azvino. Mune mhinduro, nekuda kwekudzikiswa kwemakemikari zvinhu, maitiro ekuisa zvimwe zvinhu pamusoro peiyo workpiece kuti aumbe kupfeka inonzi electroless plating, senge electroless nickel, Electroless mhangura yakanamirwa, nezvimwe.
KUPFUURA MHUDZIRO KUPFUURA
Iyi nzira ndeyekunyungudutsa kana kupisa zvine mutsindo zvinhu pasi pekupisa kwakanyanya mamiriro kuti vagadzire kupfeka pamusoro peiyo workpiece. Maitiro makuru ndeaya:
(1) Hot Dip yakanamirwa pamifananidzo
Maitiro ekuisa simbi yekugadzira musimbi yakanyungudutswa kuti igadzire pamusoro payo inonzi hot-dip plating, senge inopisa-dip galvanizing uye inopisa-dip aluminium.
(2) Kupisa kwekushisa
Maitiro ekuomesa simbi yakanyungudika uye kuimwaya pamusoro peiyo workpiece kuti iite kupfeka kunonzi kupisa kwekupisa, senge kupisa kwekupisa zinc uye kupisa kupisa aluminium.
(3) Kupisa kutsika
Maitiro ekudziisa nekutsimbirira iyo simbi foil kufukidza pamusoro peiyo workpiece kuti iite yekumhara dura inonzi inopisa kutsika, senge inopisa kupisa aluminium foil.
(4) Chemical kupisa kurapwa
Maitiro ekuti iyo workpiece inosangana nemakemikari zvinhu uye inopisa, uye chimwe chinhu chinopinda pamusoro peiyo workpiece pane yakanyanya tembiricha inonzi kemikari kupisa kurapwa, senge nitriding uye carburizing.
Nekutema, maitiro ekuisa simbi yakaiswa pamusoro peiyo workpiece kuti iite iyo yekumonera nhare inodaidzwa kunongedzera, sekumhara kunowirirana nema alloys ekupfeka.
Kumanikidza VACUUM NZIRA
Iyi nzira inzira yekushandisa iyo vaporized kana ionized uye yakaiswa pamusoro peiyo workpiece pasi yakakwira vacuum kuti vagadzire kupfeka. Nzira huru ndeye.
(1) Panyama mweya mweya (PVD)
Pasi pemamiriro ekutsvaira, maitiro ekupisa simbi mumaatomu kana mamorekuru, kana kuisa iwo ion muion, inoiswa zvakananga pamusoro peiyo workpiece kuti iite kupfeka, kunodaidzwa kunzi mhute yemuviri. Iyo yakaiswa particle danda inouya kubva kune asiri emakemikari zvinhu, senge evaporation Kuputira yakanamirwa pamifananidzo, Ion ra
(2) Ion kuiswa
Iyo nzira yekuisa ioni dzakasiyana pamusoro peiyo nzvimbo yebasa pasi pemagetsi emagetsi ekugadzirisa iyo yepamusoro inonzi ion kudyara, senge jekiseni re boron.
Pasi pesimba rekumanikidza (dzimwe nguva kumanikidzwa), maitiro ayo gasious zvinhu zvinoumba yakasimba deposition pamusoro peiyo workpiece nekuda kwekushanduka kwemakemikari inonzi makemikari mweya mweya, senge mweya mweya we silicon oxide uye silicon nitride.
DZIMWE Nzira DZOKUMBIRA
Zvikurukuru zvemakanika, zvemakemikari, zvemagetsi, uye epanyama nzira. Maitiro makuru ndeaya:
Iyo isina basa yekumwaya kana yekutsvaira nzira ndeye nzira yekuisa pendi (yakasikwa kana inorganic) pamusoro peiyo workpiece kugadzira unhani, unonzi kupenda, senge kupenda, kupenda, nezvimwe.
Impact yakanamirwa pamifananidzo
Maitiro ekuumba unhani pamusoro peiyo nzvimbo yekushandira ine michina yekukanganisa inonzi kukanganisa kuisirwa, sekukanganisa galvanizing.
Laser pamusoro kurapwa
Maitiro ekuvhenekesa pamusoro peiyo workpiece ne laser kushandura chimiro chayo inonzi laser pamusoro kurapwa, senge laser kudzima uye laser remelting.
Iyo tekinoroji yekugadzirira super-yakaoma firimu pamusoro peiyo workpiece nenzira yemuviri kana yemakemikari nzira inonzi yakanyanya-yakaoma firimu tekinoroji. Zvakadai sedhaimani firimu, cubic boron nitride firimu uye zvichingodaro.
ELECTROPHORESIS UYE KUSVIRA KWEMAgetsi
Seye electrode, iyo yekushandira inoiswa mukati meye inoyerera mvura-yakasungunuka kana pombi-emulsified pendi, uye inoumba dunhu neimwe electrode mupendi. Pasi pechiito chemunda wemagetsi, mhinduro yekumhara yakaparadzaniswa kuita ma resin ion akabhadhariswa, macations anoenda kune cathode, uye anion anoenda kune anode. Aya maayoni anobhadhariswa resini, pamwe chete neas adsorbed pigment particles, anosarudzwa kumagetsi pamusoro peiyo workpiece kuti vagadzire kupfeka. Maitiro aya anonzi electrophoresis.
2. Kupfapfaidza kwemagetsi
Pasi pekuita kweiyo DC yakakwira-magetsi magetsi munda, iyo atomized isina mhosva inopenda pendi inonongedzwa kuti ibhururuke kune inovhenekerwa-inobhadharwa workpiece kuwana pendi firimu, inonzi static kupuruzira.